သူကိုယ်တိုင်ဖန် တီးရေးစပ်ထား တဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့သီချင်းတွေနဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာနေသူတွေကို ထိထိမိမိ သတိပေးလိုက်တဲ့ ဆောင်းဦးလှိုင် – Shwe Likes
Shwe | May 28, 2022 | Celebrity | No Comments
ဆောင်းဦးလှိုင် ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂီ တလော ကမှာ နှစ်ပေါင်းများစွ ာတိုင်အောင် လျှောက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် Pop အဆိုတော် တ စ်‌ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းဦးလှိုင်ဟာ လတ်တလော မှာတော့ ပြည်ပမှာ နေထိုင်နေပြီး ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီ ချင်းတွေနဲ့ အတူ ဂီတလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆက်လက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ဆေးပညာဘွဲ့ရတစ် ဦးလည်း ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင် းမှာတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးသားပြီး ကိုယ်တိုင်သီဆို ခဲ့တဲ့ တကိုယ်ေ တာ်တေး Album ပေါင်း ၁၀ ချပ်ထက်မနည်း ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့ ကိုယ်ဟန်နဲ့ အသံအေးေ အးလေးနဲ့ ပရိသတ် ရင်ထဲရောက်ေ အာင် သီဆိုနိုင်သူ တစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
လက်ရှိမှာ ဆောင်းဦး လှိုင်က နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေပေမယ့် နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာ တတ်တတ်ကြွကြွ ပါဝင်နေ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ ဆောင်ဦးလှိုင်ကာ Cover song သီဆိုတဲ့သူတွေ များပြားလာ တာကြောင့်သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့ ဖန်တီးထ ားတဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်ကျိုးရှာသူတွေအတွက် အသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုပြီး ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။
aဆာင်ဦးလှိုင် က“ မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ “ဂျပန်အမျိုးသမီး အဆိုတော်ဟာ ရန်ကုန်မှာပွဲလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီက ခွင့်တောင်းပြီးမ ဆိုတာပါ။ ဂျပန်လို ဘာသာပြန်ပြီး အနည်းငယ်ဆို ခွင့်ပြုဖို့ပါ ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကြွားဝါတာတွေ ဘယ်တော့မှ ရေးတင်လေ့မရှိလို့ လူအများမသိကြပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် Original Songs တွေကို လူအများစုက တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
အလွန်တရာ ယုတ်ညံ့သူတချို့သာ အပုတ်ချသူချ၊ အသုံးချ ကိုယ်ကျိုးရှာသူရှာ လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ Google နဲ့ YouTube ဟာ သီချင်းတွေကို ယ်ပိုင်သံစဉ်ဟုတ်မ ဟုတ် နည်းပညာနဲ့ စစ်ဆေးပြီးမိ နစ်ပိုင်းအတွင်း အဖြေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ခေတ်ကြီးပါ။ ကျွန်တော့် Own Tune တွေ အဟောင်းရောအသစ်ပါတစ်ပုဒ်မှ Copyrights နဲ့မငြိပါ။ ဆိုလိုတာကOriginal songs ( မြန်မာအခေါ် Own Tune ) လို့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
မျှော်လင့်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို မြန်မာအဆိုမြန်မာစာသား နဲ့မကြားရတာကြာ ခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလား ?? ( အထူးသဖြင့် Live shows & cover songs )အဖြေကရှင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် ခွင့်မပြုတော့လို့ပါ။ အများအကျိုးအတွက် ခွင့်ပြုချက်တောင်း လာတဲ့အခါမှသာ စဉ်းစားပါမယ်။ ကျွန်တော့်သီချင်း အားလုံးကျွန်တော့်ရင်သွေးများ ဖြစ်ပါကြောင်း။ အလွန်တန်ဖိုးထားပါကြောင်း။ဆောင်းဦးလှိုင် May 25th 2022 ” ဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။ Credit
ေဆာင္းဦးလွိုင္ ကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ဂီ တေလာ ကမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြ ာတိုင္ေအာင္ ေလၽွာက္လွမ္းလာခဲ့တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ Pop အဆိုေတာ္ တ စ္‌ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္းဦးလွိုင္ဟာ လတ္တေလာ မွာေတာ့ ျပည္ပမွာ ေနထိုင္ေနၿပီး ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ သီ ခ်င္းေတြနဲ႔ အတူ ဂီတလႈပ္ရွားမႈေတြ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူဟာ ေဆးပညာဘြဲ႕ရတစ္ ဦးလည္း ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္ းမွာေတာ့ ကိုယ္တိုင္ေရးသားၿပီး ကိုယ္တိုင္သီဆို ခဲ့တဲ့ တကိုယ္ေ တာ္ေတး Album ေပါင္း ၁၀ ခ်ပ္ထက္မနည္း ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သီခ်င္းေတြကို ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္နဲ႔ ကိုယ္ဟန္နဲ႔ အသံေအးေ အးေလးနဲ႔ ပရိသတ္ ရင္ထဲေရာက္ေ အာင္ သီဆိုနိုင္သူ တစ္ေယာက္ဆိုလည္း မမွားပါဘူး။
လက္ရွိမွာ ေဆာင္းဦး လွိုင္က နိုင္ငံျခားမွာ ေရာက္ေနေပမယ့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ တတ္တတ္ႂကြႂကြ ပါဝင္ေန တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာဆိုရင္ေတာ့ ေဆာင္ဦးလွိုင္ကာ Cover song သီဆိုတဲ့သူေတြ မ်ားျပားလာ တာေၾကာင့္သူ႔ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္နဲ႔ ဖန္တီးထ ားတဲ့ သီခ်င္းေတြကို ကိုယ္က်ိဳးရွာသူေတြအတြက္ အသုံးျပဳခြင့္မေပးဘူးဆိုၿပီး ေျပာလာတာျဖစ္ပါတယ္။
aဆာင္ဦးလွိုင္ က“ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ “ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီး အဆိုေတာ္ဟာ ရန္ကုန္မွာပြဲလုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီက ခြင့္ေတာင္းၿပီးမ ဆိုတာပါ။ ဂ်ပန္လို ဘာသာျပန္ၿပီး အနည္းငယ္ဆို ခြင့္ျပဳဖို႔ပါ ခြင့္ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ႂကြားဝါတာေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ေရးတင္ေလ့မရွိလို႔ လူအမ်ားမသိၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ Original Songs ေတြကို လူအမ်ားစုက တန္ဖိုးထားၾကပါတယ္။
အလြန္တရာ ယုတ္ညံ့သူတခ်ိဳ႕သာ အပုတ္ခ်သူခ်၊ အသုံးခ် ကိုယ္က်ိဳးရွာသူရွာ လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ Google နဲ႔ YouTube ဟာ သီခ်င္းေတြကို ယ္ပိုင္သံစဥ္ဟုတ္မ ဟုတ္ နည္းပညာနဲ႔ စစ္ေဆးၿပီးမိ နစ္ပိုင္းအတြင္း အေျဖထုတ္ေပးနိုင္တဲ့ေခတ္ႀကီးပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ Own Tune ေတြ အေဟာင္းေရာအသစ္ပါတစ္ပုဒ္မွ Copyrights နဲ႔မၿငိပါ။ ဆိုလိုတာကOriginal songs ( ျမန္မာအေခၚ Own Tune ) လို႔သတ္မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။
ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာကို ျမန္မာအဆိုျမန္မာစာသား နဲ႔မၾကားရတာၾကာ ခဲ့ၿပီမဟုတ္ပါလား ?? ( အထူးသျဖင့္ Live shows & cover songs )အေျဖကရွင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ခြင့္မျပဳေတာ့လို႔ပါ။ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း လာတဲ့အခါမွသာ စဥ္းစားပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သီခ်င္း အားလုံးကၽြန္ေတာ့္ရင္ေသြးမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ အလြန္တန္ဖိုးထားပါေၾကာင္း။ေဆာင္းဦးလွိုင္ May 25th 2022 ” ဆိုၿပီးေရးသားလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္…။ Credit
ကြည်နူးနေရတဲ့ မမနှင့်မောင်လေး ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ချောရတနာ
တော်လှန်ရေးကိုပဲ အပြီးတိုင်လုပ်တော့မှာမို့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ် နာမည်ကိုပါ ပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဟိန်းထက်